रेल सुझाव अनि भाडे युरोप लागि | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > रेल सुझाव अनि भाडे युरोप लागि
युरोप वरिपरि यात्रा को लागि रेल सुझाव यात्री लागि आवश्यक हो. पहिले, त्यहाँ युरोप यात्रा लागि विभिन्न कारणहरू छन्. तपाईं सुन्दर पुल हेर्न सक्नुहुन्छ, रेलवे स्टेशन, र समान रूपमा मनोरम दृश्यहरु. अथवा तपाईं को अचम्मको संस्कृति हेर्न यात्रा गर्दै इटाली. अर्कोतर्फ, तपाईं हुन सक्छ व्यवसायको लागि यात्रा. वा माथिका सबै र दुबै व्यवसाय र रमाईलो यात्रा गर्दै – जबकि परिभ्रमण कारणहरू को आवश्यकता सधैं भिन्न छन् सुझाव र भाडे यात्रा को लागि नै रहने.
युरोप मा स्वतन्त्र यात्री.
सर्वश्रेष्ठ ट्रेन सुझाव & रेलमार्फत यूरोप यात्राको लागि ह्याक्सहरू
पहिले, नगर्नुहोस् धोकेबाज यात्रा गल्ती एक यात्रा मा युरोप मा सबै कुरा हेर्न को लागी को. युरोप एक यात्रा मा हेर्न पनि ठूलो छ भन्ने तथ्यलाई बाहेक, युरोप मा शहर पनि एक यात्रा मा हेर्न निकै ठूलो. वास्तविकता मा, यसलाई आफ्नो यात्राको लागि एक ध्यान चयन र यसलाई लीन राम्रो छ. यो युरोप आफ्नो पहिलो यात्रा हो घटनाको, तपाईं फ्रान्स जस्तै जनसंख्या विचार गर्नुपर्छ, इटाली, स्पेन, र जर्मनी.
योजना र अगाडि बुक
अगाडि बुकिंग लागि रेल सुझाव मात्र टिकट अगाडि समय मदत बुकिंग छैन भन्ने छ तपाईं बजेट यसलाई पनि आफ्नो सम्पूर्ण यात्रा लागि सिट आरक्षित गरेको छ ग्यारेन्टी गर्न मद्दत गर्न सक्छ. प्रारम्भिक बुकिंग टिकट प्रकाश मा अधिकतम लाभ हुनुको, हामी चाँडै तिनीहरूले उपलब्ध रूपमा टिकट बुक गर्न लग इन सिफारिस गर्छौँ (2-3 महिना पूर्व यात्रा गर्न). यसबाहेक, अफ-सीजनको भ्रमणको योजनाले तपाईंको भीडबाट बच्न र अझ राम्रा मूल्यहरू पनि प्राप्त गर्दछ. छैन उल्लेख, प्रारम्भिक बुकिंग तपाईं ठूलो भीड र ठूलो लाइनहरू जोगिन मदत गर्न सक्छ कि. यसबाहेक, तपाईं जान बुक यदि पर्यटक हटस्पट जुलाई / अगस्ट जस्तै उच्च सिजन समयमा, तपाईको स्थानीय मानिसहरुसंग भेट हुने सम्भावना कम छ र पर्यटकहरु द्वारा घेरिएको बढी सम्भावना हुन्छ. यद्यपि तपाईं अझै यी दृश्यहरूमा सबै दृश्यहरू हेर्न सक्षम हुनुहुनेछ तथापि तपाईं प्रामाणिक अनुभवहरू गुमाउनुहुनेछ. घटना मा कि तपाइँ एक जोडी को रूप मा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ वा एक समूह मा तपाईं छुट मूल्यको हकदार हुन सक्छ तपाईंको यात्रा को लागी. तर तपाईं यात्रा को सम्पूर्ण अवधि लागि एक जोडी / समूहको रूपमा सँगै रहन भने सम्झना यी छूट मात्र मान्य हुनेछ.
यात्रा कागजात लागि पहिलो रेल सुझाव छ: युरोप देशहरूमा कि पर्यटकहरु यात्रा कागजात देखाउन बिना सीमाना मार्फत जान अनुमति दिन्छ तिनीहरूलाई बीच एक सम्झौता गर्छन. युरोपेली संघ देशहरूमा, खासमा, यात्रु पासपोर्ट देखाउन बिना छोडेर प्रविष्ट गर्न अनुमति. तथापि, यो खुला सीमाना नीति भाग सबै युरोपेली संघ देशहरूमा क्रोएशिया जस्तै, बुल्गारिया, र रोमानिया. तुलनामा, त्यहाँ यूरोपियन युनियनको हिस्सा नभएका देशहरू छन् जसले स्वीजरल्याण्ड र नर्वे जस्ता सम्झौतामा भाग लिन्छन्.
हाम्रो उत्कृष्ट टिकट मूल्य तपाईंको रेल सुझावहरू प्रयोग
एक ट्रेन सेव तपाईं सकेसम्म धेरै पैसा बचत गर्न चाहन्छ. हाम्रो खोज ईन्जिनले तपाईलाई सस्तो टिकट भेट्टाउँदछ. अब हाम्रो एक ट्रेन बचत गर्नुहोस् साइटमा ब्राउज गर्नुहोस् र लिनुहोस्3मिनेट आफ्नो अर्को रेल टिकट पाउन. क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेर भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ, र 10 अन्य विकल्प.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-tips-hacks%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
तपाईं एक वेबसाइट स्वामित्व भने, तपाईं जडान गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो RSS फीड.
#traveleurope europetravel सुझाव रेल सुझावहरू रेल यात्रा